Annie Potts weGhostbuster Anoti 'Ghostbusters: Mushure mekufa' ndeye "Pretty Trippy"
musha Horror Varaidzo Nhau Ghostbuster's Annie Potts Anoti 'Ghostbusters: Mushure mekufa' ndeye "Akanaka Trippy"
Ghostbuster's Annie Potts Anoti 'Ghostbusters: Mushure mekufa' ndeye "Akanaka Trippy"
The cast of Ghostbusters: Mushure mekurarama aona iyo firimu izvozvi, uye hapana chimwe chatinonzwa kunze kwezvinhu zvakanaka kubva kwavari vese. Nhengo dzekutanga dzesimbi uye vatsva vanoita kunge vese vanobvumirana kuti iyo firimu yakanaka kwazvo. Mumwe nemumwe achizvitsanangura nenzira dzavo dzakasiyana. Zvakanaka, Annie Potts uyo anotamba Janine mumafirimu maviri epakutanga zvakare Ghostbusters: Mushure mekurarama akataura zvakare zvimwe zvinhu zvakanaka nezve firimu raJason Reitman.
“Ini ndiri mumwe wavo. Handizive kuti tinofanirwa kutaura zvakadii, asi ndinofunga zviri kubuda muna Mbudzi. Ndiri kureva, zvaifanirwa kubuda senge muna Chikumi gore rapfuura, izvo zvazvisina kuitika. Asi hongu, ini ndiri mazviri uye zvinoshamisa. "Zvakanaka, nekuti tanga tichiongorora mavara aya uye tichidzokerana uye neese makore ari pakati - yakanaka katatu." Potts akaudza TooFab.com.
Ini ndinofungidzira kuti ingave trippy kuona vanhu vausina kumboona kwenguva uye kuti udzokere mukati chavowo vevanyori vemifananidzo vaifanirawo kuve rwakazara rwendo.
Zvakanaka, tingadai takatoona Ghostbusters: Mushure mekurarama parizvino, dai yanga isiri ye COVID-19 uye zvese izvo BS. Asi, isu tave pedyo nemusi wayo wekuburitsa pakupedzisira. Isu tese tichave tichitarisa iyo paranormal kubwinya painosvika gore rino, Mbudzi 11.
Muri kufa here kuona Ghostbusters: Mushure mekurarama? Uri kufara here kuona Potts achidzoka saJanine? Tiudzei muchikamu chemashoko.
Kunobva: (Ghostbusters Nhau)
Marvel's MODOK iri kuuya nekukurumidza kubva kuHulu uye inotaridzika kunge dang inoshamisa. Tarisa uone tirera pano.
Annie PottsEctoplasmGhostbusters: Mushure mekuraramajason reitman
'Spare Zvikamu' Nzvimbo Punk Rockers muGladiator Arena Nemaketani uye Mapfumo eArms
Nyowani Slasher 'Iyo Retreat' Inouya Chivabvu 21 kubva kuna Director Pat Mills
Bhurawuza Cateories Select Category Amazon (bhaisikopo) (7) Amazon (dzakateerana) (9) AppleTV + (1) Blu mahara (4) Comedy Horror (46) Comics (12) Facebook (akateedzana) (1) Ngano (31) Yakawanikwa Footage (26) Gore (23) HBO (mafirimu) (4) HBO (dzakateerana) (7) Horror Mabhuku (44) Horror Varaidzo Nhau (10,463) Anotyisa Mafirimu (175) Zvinotyisa Series (50) Zvinotyisa Subgenres (8) Hulu (akateedzana) (4) Bvunzurudzo (bhaisikopo) (32) Nhaurirano (dzakateerana) (2) LGBTQ Inotyisa (29) Lists (mafirimu) (37) Lists (akateedzana) (2) Pamusika (19) Monster Horror (9) Wongororo dzeMovie (41) Mafirimu (11) Mumhanzi (35) Netflix (bhaisikopo) (15) Netflix (akateedzana) (20) Kwete-Ngano (3) Zvakaenzana (75) Psychological Horror (zvinonakidza) (52) Series Ongororo (7) Kubvunda (bhaisikopo) (39) Kubvunda (dzakateerana) (15) Slasher (4) Shamisa uye Zvisingawanzo (35) Kutenderera Mafirimu (47) Kuratidzira Series (17) Zvidhori (2) Ngoro (firimu) (134) Ngoro (dzakateedzana) (31) Mhosva Yechokwadi (41) Vhidhiyo Mitambo (165) YouTube (bhaisikopo) (3) YouTube (akateedzana) (11)